Apple waxay bixisaa Apple Maanta Kulamada Luqadda Saxeexa ee Mareykanka oo ka tarjumaya Maalinta Caalamiga ee GAAD | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay ku bixisaa kal-fadhiyada Apple Maanta luqadda calaamadaha ee Mareykanka iyada oo laga dheehan karo maalinta GAAD adduunka
On 20 May, maalinta adduunka si kor loogu qaado wacyiga marin u helka Webka ayaa la xusaa, oo loo yaqaan Ingiriisiga sida Maalinta Ogaanshaha Helitaanka Caalamiga (GAAD). Ujeedada maalintani waa in laga hadlo, laga fikiro oo wax laga barto marin u helka tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah. Sababtaas awgeed, Apple waxay soo saari doontaa dhowr kulan oo taxane ah oo lagu soo daray kal-fadhiyada Apple, kaas oo lagu fulin doono luqadda dhagoolaha si looga qaybgalo dadka naafada ah.
Apple ayaa la geeyay bog internet ah si loogu dabbaaldego Maalinta Wacyigelinta Helitaanka Adduunka. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku biirno kal-fadhiyo muuqaallo toos ah oo lagu soo bandhigay Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka marka lagu daro kaalmada isku dhafan ee Apple VoiceOver Waxyaabaha aasaasiga u ah iPhone iyo iPad-ka ayaa la baari doonaa talooyinka qaarna waa la wadaagi doonaa. Hoos-u-dhaca waxaad ka heli kartaa taariikhaha iyo xilliyada ay dhacdooyinku ka dhacaan. Kalfadhiyada GAAD waxay noqon doonaan kuwo farsamo iyo waxaa lagu martigelin doonaa Webex. Waxa kale oo jira kal-fadhi “Maanta Guriga jooga” oo ku jira ASL oo diiradda saaraya adeegsiga barnaamijka Clips.
In kasta oo aynaan sifiican uga fikirin, hadana waxaa ka muhiimsan in la abuuro degel la heli karo oo la shaqeeya daalacashada badan ee internetka halkii laga abuuri lahaa bogga ugu soo jiidashada badan, maxaa yeelay dadka qaarkiis, internetka la heli karo ayaa wax weyn ka beddelaya nolol maalmeedkooda. Sannadkii hore WebAIM waxay falanqeeyeen hal milyan oo bog oo internetka ah waxayna ogaadeen in ugu yaraan 98% waxay lahaayeen cillad gelitaan la'aan, ahaanshaha celceliska khaladaadka ku dhowaad 61 ee bogagga la booqday. Guul darrooyinka ugu badan waxay ahaayeen:
Qoraalka isbarbar dhig hooseeya 86.3%
Sawir maqan Qoraal Kale 66%
Xidhiidh madhan 59.9%
Calaamadaha foom gelinta la la'yahay 53.8%
Badhannada faaruqa ah 28.7%
Luuqada dukumintiga waa la waayey
Aniga oo tixgelinayna taas waxaa jira ku dhowaad bilyan qof oo naafo ah adduunka, waan iska indhatireynaa kooxdaas oo dhan. Waa lagama maarmaan in la ogeysiiyo alaab-qeybiyeyaasha baahiyahan oo ugu yaraan Apple oo leh kulamadan ay isku dayaan inay yareeyaan farqiga jira ee dadkan. Waxaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo dalal badan, ma ahan oo keliya Mareykanka, maxaa yeelay maahan oo keliya dad naafo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ku bixisaa kal-fadhiyada Apple Maanta luqadda calaamadaha ee Mareykanka iyada oo laga dheehan karo maalinta GAAD adduunka
Filimkii ugu horreeyay ee taxanaha Amiir Harry hadda waa la heli karaa